Dhammaan Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato ku saabsan Rikoodh Files
Streaming Audio Recorder The Best leh tayo sare leh
Waxaan u baahanahay taariikhqorihii shaashadda si ay u qabsadaan meel kasta oo ka mid ah shaashadda midkood sida shaashadda ama file video ah. Halkan waxaan ku tusi doonaa hogaanka taariikhqorihii 5 screen in aad. Read More >>
Halkan waxaa ugu sareysa 5 software taariikhqorihii webcam free 2015. software ugu fiican waxay kaa ha record videos ka webcam si fudud. Read More >>
Marka aad isticmaasho catcher video ah, waxaad la kulmi doontaa tuulmo la mid ah dhibaatooyinka. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona xalka ku saabsan video catcher. Read More >>
Sawir guud oo ah taariikhqorihii shaashadda kombuyuutarka aad oo dhan sheegayaa software duubo shaashadda iyo sida loo isticmaalo. Raac talaabooyinka si ay u qoraan shaashadda kombuyuutarka aad qaabab video kala duwan. Read More >>
Maqaalkani waxa uu soo bandhigi doonaa in aad hal barnaamij software oo taariikhqorihii screen oo u qoraan karaan hawlaha computer dhawaaqa, ama rikoorka shaashada aad u baahan tahay. Read More >>
Taariikhqorihii desktop waxa uu ku siinayaa fursado duubo desktop dabacsan marka aad qortid shaashadda desktop-ka:. Suuqa kala qabsadaan codsiga, size caadadii ama desktop buuxa Read More >>
Waa in la ogaadaa in video iyo sidoo kale duubo shaashadda waa ka shaqeynayaan in la doonayo by users aad u gaarka ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa laga soo saaray fekerka ah iyo user sidoo kale helo Read More >>
Waa kuma sidii ay adag tahay sidii aad u malaynayso in ay u qoraan iyo edit video ah. Waxay intaasi shakhsiyadda oo dheeraad ah si video is-soo saaray halkii si fudud la wadaago dadka kale. Ma jeclaan lahayd in aad rabto si ay u awoodaan inay sameeyaan in naftaada? Read More >>
Tilmaan-bixiyahan waxa uu kuu sheegayaa sida loo sameeyo video tutorial la software duubo shaashadda. Iyada oo talooyin badan bilowga ah iyo talooyin loogu talagalay gacmaha jir. Read More >>
Screen taariikhqorihii software DemoCreator bixisaa doorashada deegaanka lagu duubo dabacsan marka aad bilowdo si ay u qoraan desktop-ka: qabsadaan suuqa kala codsiga, qabsadaan size caadadii, iyo Read More >>